RASMI: Chelsea Oo Xaqiijisay Inay Barcelona Kala Soo Wareegtay Xiddig Lagu Tilmaamo 'New Virgil van Dijk' - Gool24.Net
RASMI: Chelsea Oo Xaqiijisay Inay Barcelona Kala Soo Wareegtay Xiddig Lagu Tilmaamo ‘New Virgil van Dijk’
Chelsea ayaa dhamaystirtay saxeexa difaac mustaqbal weyn leh oo lagu naanayso Virgil van Dijk-ka cusub oo ay ka soo qaatay Barcelona, waxaanu qalinka ku duugay heshiis shan sannadood ah.
Blues waxay si rasmi ah warbaahinta ugu soo bandhigtay difaaca reer Netherlands ee Xavier Mbuyamba oo ay da’diisu tahay 18 jir, isla markaana sannadkii hore ay Barcelona kasoo iibsatay kooxda reer Netherlands ee MVV Maastricht oo 11 ciyaarood oo kooxda koowaad ah uu u saftay.
Inkasta oo uu kasoo muuqday kooxda da’yarta ee UEFA Youth League ka qayb-gashay, haddana laacibkan ayaan Barcelona ka helin qanaacadii uu filayay, waxaana ka faa’iidaysatay Chelsea oo gacanta ku dhigtay da’yarkan.
Laacibkan oo ku raaxaysta kubbad haynta iyo kubbadaha sare ee madaxa ah oo aanay cidina ku garaacin ee Mbuyamba ayaa qaab ciyaareedkiisa lagu tilmaamay inuu kala mid yahay Virgil van Dijk oo Liverpool ka caawiyey inay ku guuleysato Champions League iyo Premier League.
Xulka qaranka Netherlands ee ay da’doodu ka hoosayso 19 jirrada oo uu u saftay kaddib, waxa hadda gacanta ku qaban doona Frank Lampard oo dhallinyaro kusoo ururiyey safkiisa, waxaanu u carbin doonaa in mustaqbalka dhow uu hoggaamiyo khadka difaaca.
Mbuyanba ayaa la sheegay inuu ku qancay qaabka uu tababare Lampard usoo saaray ciyaartoyda ay ka midka yihiin Mason Mount, Reece James iyo Tammy Abraham oo uu ka dhigay xiddigo waaweyn oo safkiisa koowaad kasoo muuqday kulamo badan xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee uu layliyey Blues.
Xiddigan da’da yar ayaa la filayaa inuu si toos ah ugu biiri doono kooxda da’yarta Chelsea oo uu tartamada hoose u ciyaari doono illaa inta uu helayo fursad kooxda koowaad ah.